192.168.8.1 - Muxuu internet-kayga u gaabiyaa?
Hababka 6-da ah ee ugu sarreeya si loola qabsado Xiriirinta Internetka Gaaban
Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax ka xanaaq badan oo leh helitaanka xiriirin Wi-Fi ah ama Ethernet xawaaraha internetka oo gaabis ah. Hoos waxaa ku yaal fikrado lagu xallinayo, saxda ah, si fudud looga gudbo xawaaraha internetka oo gaabis ah.
1. Hubi qorshahaaga internetka
Waqtiyada qaarkood, khadkaaga internetka wuu gaabis yahay maadaama aad dib u bixinayso internet-ka. Gal bogga bixiyahaaga oo soo ogow qorshaha aad hayso. Hadda booqo fast.com ama bogag kale oo kale oo samee tijaabo xawaare ah. Habka ugu wanaagsan ee loo dardar gelin karo internetkaaga waa inaad kor u qaaddo qorshahaaga.
2. Sii qalabkaaga hagaajinta guud
Hubi routerkaaga & modemkaaga & samee dib u dejin deg deg ah oo fiirso haddii taasi shaqeyneyso. Baadh PC-yada kale ee gurigaaga ku yaal si aad u eegto haddii ay yihiin internet waa gaabis. Haddii arrinta kaliya ay ka dhacdo hal PC, arrintu waa PC-gaas, ma ahan modemkaaga ama router-kaaga.
3. Hagaaji calaamadahaaga Wi-Fi
Kahadalka Wi-Fi, waxaad ogaan kartaa in internetkaaga & router-gaagu fiicanyahay; wali calaamadahaaga wirelessku waa daciif yihiin. Tani waxay soo saari kartaa kahor-gaabis-ama, uguyar, waayo-aragnimo dhiraandhiriye ka buuxan. Kadib, waxaad u baahan kartaa inaad dhaqaaqdo, hagaajiso, oo aad kor u qaaddo routerkaaga farsamooyinka qaarkood.
4. Demi ama xaddid barnaamijyada ku dhejisan xawaaraha xawaaraha internet-ka
Haddii qalabku u muuqdo inuu shaqeynayo, ilaali haddii barnaamijyo dheeri ah ay xukumayaan isku xirnaanta. Tusaale ahaan, haddii aad ku soo degsato faylal BitTorrent ah, daalacashada webka caadiga ahi way ka gaabin doontaa. Xitaa waa inaad isku daydaa inaad rakibato fidinta sida Asturnaanta Badger & AdBlock Plus oo xannibaya in yar oo ka mid ah xayeysiisyada u badan bandwidth-ka, fiidiyowyada & animations-ka, kuwaas oo baabi'in kara xiriirkaaga.
5. Adeegso Server-kii ugu dambeeyay ee DNS ah
Intaad cinwaan ku qoreyso biraawsarka, PC-gaagu wuxuu adeegsanayaa xoogaa loo yaqaan 'DNS' si uu u raadsado una turjunto cinwaanka IP-ga ee jawaabta PC-ga ah. Waqtiyada qaarkood, in kasta oo, adeegeyaasha kombuyuutarkaaga ay u adeegsadaan inay raadiyaan macluumaadkaas waxaa laga yaabaa inay arrimo leeyihiin, ama gebi ahaanba hoos u dhacaan. Nasiib wanaagse, waxaad haysataa doorashooyin badan oo dhaqso badan, oo bilaash ah oo aad isticmaali karto, sida daruur daruur ama Google DNS.
4. La xiriir shirkad bixiyahaaga internetka
Haddii aad soo martay dhammaan talaabooyinka cilad bixinta ee muhiimka ah & internetkaagu wali gaabis yahay, markaa waa waqtigii lala xiriiri lahaa alaab-qeybiyahaaga internetka & fiiri haddii dhibaatadu dhammaadkooda tahay. Xusuusin: kaliya ha u maleynin inay wax khalad ah sameeyeen oo ula dhaqan macaamilkaaga adeegga macmiilka. Xaqiiqdii waad heli doontaa natiijooyin wanaagsan gaar ahaan haddii ay ku siin jireen xawaare aan sax ahayn intan oo dhan.
5. Ku hagaaji websaydhka qunyar socod
Dhibaatada ka-qabashada internetka oo gaabis ah ayaa laga yaabaa inay qaadato wakhti, isla markaana ku-meel-gaadhka ah weli waxaad u baahan tahay daalacasho. Ama waxaa laga yaabaa inaad ku jirto maqaaxi ama duulimaad, mana jiraan wax aad ku qaban kartid xawaaraha gaabiska ah. Marka sidaa darteed, waxaa la joogaa waqtigii kor loogu qaadi lahaa shabakaddaada si qunyar socod ah.
6. Si caqli badan u shaqee
Haddii ay tahay inaad dhammaystirto shaqada ku-xirnaanta gaabiska, waxaad u baahan kartaa inaad doorato shaqooyin ka duwan haddii internetka uu ka sarreeyo. U kala qaybi hawshaada bandwidth-light iyo sidoo kale kuwa xawaaraha badan leh. Markaad kujirto isku xirnaanta gaabiska ah samee kuwa fudud & aruur dhammaan howlaha baaxadda leh oo dhan si wadajir ah markaa waad sameyn kartaa markii aad hesho xiriir dhakhso leh.